मलेसियाले नेपाललाई दियो १ सय १ रनको लक्ष्य,सन्दीपको नयाँ कीर्तिमान ! | Hamro Khelkud
मलेसियाले नेपाललाई दियो १ सय १ रनको लक्ष्य,सन्दीपको नयाँ कीर्तिमान !
एजेन्सी – मलेसियामा जारी विश्व ट्वान्टी–२० एसिया छनोट ‘बी’ दोस्रो खेलमा घरेलु टोली मलेसियाले नेपाललाई १ सय १ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले १९ ओभर ३ बलमा अल आउट हुदैँ १०० रन बनाउन सकेको हो । पहिलो विकेटको लागि ओपनर सायिद अजिज र शफिक शरिफले ५ ओभरमा ३० रन को साझेदारी गर्दै गतिलो सुरुवात गरेका थिए । ४ ओभर ५ बलमा सन्दीप लामिछानेले सायिद अजिजलाई विकेट किपर बिनोद भण्डारीको हातबाट क्याच आउट गराउदैँ १३ रनमा पेभिलिएनको बाटो देखाए पछि नेपाल खेलमा फर्किएको थियो ।
त्यस्तै तेस्रो विकेटको लागि शरिफ र अमिदले ३९ को साभेदारी गर्दै बलियो स्थिीतीमा पुयाएउने कासिस गरेका थिए । ११ ओभर १ बलमा सोमपाल कामीले अमिद फैजलाई ७ रनमा पेभिलिएन फर्काएपछि नेपाल पूर्ण रुपमा खेलमा फर्किएको थियो । कुनै समय ११ ओभर १ बलमा ७५-३ को स्थितिमा रहेको मलेसिया १७ ओभर ३ बलमा ९४-९ को स्थिीतिमा पुगेको थियो।
उस्का लागि ओपनर शफिक शरिफले ३७ बलमा ७ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ४९ रनमा आउट भए । शरिफलाई सन्दीपले १२ ओभर ३ बलमा सोमपालको हातबाट क्याच लिदैँ पेभिलिएन फकिएका थिए । शरिफ बाहेक मलेसियाका अन्य कुनै पनि ब्याटम्यानले राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेनन् ।
नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले एक्लै ५ विकेट लिए । सन्दीपले ४ ओभरमा २० रन खर्चेर ५ विकेट लिएका हुन् । सन्दीपले १४ ओभर २ बलमा सिजर्रल आइड्रस ० मा आउट गर्दै टी २० क्रिकेट करियरमा पहिलो पटक ५ विकेट लिएका हुन् । उनि टी २० क्रिकेटमा एकै खेलमा ५ विकेट लिने पहिलो नेपाली बलर पनि बनेका छन् ।
नेपालका सोमपाल कामीले ३ र कप्तान पारस खड्काले १ विकेट लिए ।